Mas’uul ka tirsanaa Guddiga doorashooyinka Kenya oo meydkiisa laga helay duleedka Nairobi | Wakaaladda Wararka Hiilnews
Mas’uul ka tirsanaa Guddiga doorashooyinka Kenya oo meydkiisa laga helay duleedka Nairobi
Baladweyne(HNN) Nin ka mid ahaa Guddiga doorashooyinka Kenya ayaa meydkiisa laga helay duleedka magaalada Nairobi, iyadoo maalmo ka harsan tahay doorashada madaxtinimada Kenya ee dhaceysa 8-da August.
Chris Msando ayaa xubin ka ahaa Guddiga Farsamada Teknoolijiyada ee doorashada Kenya ayaa la la’aa jimcihii, waxaana meydkiisa laga helay duleedka Nairobi.
Ninkan ayaa ka mid ahaa xubnihii darsayay nidaamka codeynta doorashada oo qaab Computer ah, kaasoo aan marnaba la jabsan karin.
“Waxaan shaki ku jirin, in la jirdilay oo la dilay”ayuu yiri Madaxa Guddiga Doorashooyinka Wafula Chebukati.
Booliska ayaa sheegay in Mr Msando iyo haweeney aan la aqoonsan meydkooda laga helay agagaarka Kikuyu ee duleedka magaalada Nairobi
Xiisada ayaa cirka isku sii shareereysa, iyadoo tartanka Madaxtinimada ee dalka Kenya ay fooda nagu soo heyso, kaasoo ay ku tartamayaan Madaxweynaha talada haya Uhuru Kenyatta iyo ninka mudada dheer ay iska soo horjeedeen Raila Odinga.
Doorashada Madaxtinimada Kenya ayaa sanadkan ah mid si aad ah isha loogu haayo, waxaana kor-joogto ka noqon doona koox caalami ah oo uu ka mid yahay Xoghayihii hore ee Arrimaha Dibadda Mareykanka John Kerry.